MPT FTTH Promotion - Internet in Myanmar
MPT FTTH Promotion
Published: April 27, 2019 (4 weeks ago)
တပ်ဆင်ခ ၅၀,၀၀၀ ကျပ် သက်သာနိုင်တဲ့အပြင် လစဉ်ကြေးတစ်လ အခမဲ့ ခံစားခွင့်ရနိုင်မယ့် MPT FTTH ရဲ့ ဧပြီလပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်ရအောင် ဒီလင့်ခ် https://bit.ly/2DRiQVD မှာ အချက်အလက်များထည့်သွင်းပေးပို့ပြီး ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ အခုပဲ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါနော်။
လစဉ်လတိုင်း MPT မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ၃လုံးထိ အကျိုးအမြတ်တွေ ခံစားခွင့်ရနိုင်မယ့် Bundle Service အကြောင်းလည်း ပြောပြပါရစေ။ MPT FTTH နဲ့ MPT Mobile ကို ပူးတွဲအသုံးပြုပြီး မိုဘိုင်းလ်ဒေတာ၊ MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အကန့်အသတ်မဲ့ စာတိုဝန်ဆောင်မှု စတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို လစဉ်ကြေးပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ လစဉ်တိုင်း ခံစားနိုင်မှာပါ။
ရွေးချယ်စရာ အမြန်နှုန်း၊ လစဉ်ကြေးနဲ့ MPT မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း တစ်ခုစီတိုင်း ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးအမြတ်တွေကတော့ –
Max 10 Mbps ကို (39,000) ကျပ်သာ ကျသင့်တဲ့ FTTH Class-C မှာ ဖုန်းတစ်လုံးစီအတွက် ရရှိနိုင်မယ့် ခံစားခွင့်တွေက Mobile Data 1 GB၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုခွင့် မိနစ် ၁၀၀၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ကန့်သတ်ချက်မရှိ SMS ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ဖုန်း (၃) လုံးအထိ လစဉ်လတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်၊
Max 25 Mbps ကို (69,000) ကျပ်သာ ကျသင့်တဲ့ FTTH Class-B မှာ ဖုန်းတစ်လုံးစီအတွက်ရရှိနိုင်မယ့် ခံစားခွင့်တွေက Mobile Data2GB၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုခွင့် မိနစ် ၁၀၀၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ကန့်သတ်ချက်မရှိ SMS ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ဖုန်း (၃) လုံးအထိ လစဉ်လတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့် နဲ့
Max 50 Mbps ကို (109,000) ကျပ်သာ ကျသင့်တဲ့ FTTH Class-A မှာ ဖုန်းတစ်လုံးစီအတွက်ရရှိနိုင်မယ့် ခံစားခွင့်တွေက Mobile Data3GB၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုခွင့် မိနစ် ၂၀၀၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ကန့်သတ်ချက်မရှိ SMS ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ဖုန်း (၃) လုံးအထိ လစဉ်လတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို ရရှိခံစားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
MPT ADSL သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့လည်း သင့်ရဲ့ MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို အဓိကနံပါတ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားလိုက်တာနဲ့ Bundle Service ရဲ့ အမျိုးအစားတူညီတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် စာရင်းပေးသွင်းပုံအဆင့်ဆင့်ကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ (၁) မိမိမှတ်ပုံတင်လိုတဲ့ MPT အဓိကနံပါတ်ကနေ ၁၀၆ ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ (၂) မိမိလစဉ်ဘေလ်ပေးဆောင်နေတဲ့ Invoice ပေါ်က DSL နံပါတ်၊ FTTH Account Code၊ Customer Code တွေကို ဖော်ပြပြီး သင့်ရဲ့ Mobile Phone ကို စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ စာရင်းပေးသွင်းထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေအတွက် စာရင်းပေးသွင်းတဲ့နေ့ရဲ့ ည ၂နာရီအချိန်မှသာ အကျိုးအမြတ်တွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး Notification SMS ကိုတော့ နောက်နေ့မနက်မှာမှ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
USSD နံပါတ် *6767# ကို အဓိကနံပါတ်ကနေ သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင် ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အခြားနံပါတ် (၂)ခုရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ ရယူဖို့ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။
စာရင်းပေးသွင်းပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဒီနေရာ https://bit.ly/2SwId6M မှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သလို FTTH ဝန်ဆောင်မှု ၊ပူးတွဲဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ် ဒါမှမဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်ကို ၁၀၆ ကို ဖုန်းခေါ်၍ဖြစ်စေ၊ MPT ဝက်ဘ်ဆိုက် https://bit.ly/2Dq7HHM တွင်ဖြစ်စေ ကြည့် ရှုနိုင်ပါတယ်။
April Promotion of MPT FTTH is providing free installation fees andafree month of service for new subscribers. Please fill your interest form here https://bit.ly/2FMzcl3 to check the serviceability of your location.
MPT’s Bundle Service can be subscribed by using MPT FTTH or ADSL together with MPT mobile services. You can get mobile data, on-net voice,and unlimited on-net SMS services to max3MPT mobile numbers as benefits at that service.
Each class of Bundle Service offers various rewards for up to three MPT phones as follows:
MPT FTTH Class-C offers Max 10Mbps and the price is (39,000) Kyats. The followings are its benefits for each phone, accounting for up to3mobile devices:
• Mobile Data 1 GB
• Phone call 100 Minutes (MPT on-net)
• Unlimited SMS (MPT on-net)
MPT FTTH Class-B offers Max 25Mbps and the price is (69,000) Kyats. The followings are its benefits for each phone, accounting for up to3mobile devices:
• Mobile Data2GB
MPT FTTH Class-A offers Max 50Mbps and the price is (109,000) Kyats. The followings are its benefits for each phone, accounting for up to3mobile devices:
• Mobile Data3GB
• Phone call 200 Minutes (MPT on-net)
ADSL users can also getasimilar chance by using MPT ADSL and MPT mobile services together to get the Bundle service but you will need to register your MPT number as the main number in the registration form for getting the Bundle Service.
The stages of registration are described in this link https://bit.ly/2RDLmgHand if you want to know more details about FTTH and Bundle Service benefits, please dial 106 or visit https://bit.ly/2Rqgyk5 .
To get the Bundle Service, you will need to register your MPT number as the main number in the registration form.
The stages of registration are as follow:
(1) Dial 106 from your MPT number which would register as the main number for this service.
(2) You can register by filling the DSL number from your monthly telephone bill invoice, FTTH Account Code, and Customer code. The registration benefits will commence on at2AM of the day after registration and the notification SMS will be received in that morning.
You can add two sub-numbers as other beneficiaries’ numbers by calling USSD code *6767# from the main mobile number and you can add up to two MPT numbers as sub numbers.
The steps of registration are described in details in this linkhttps://bit.ly/2RDLmgH . If you want to know more details about FTTH and Bundle Service benefits, please dial 106 or visit https://bit.ly/2Rqgyk5 .
Myanmar Speednet Promotion